Natiijadda barnaamijka Tartan & Tacliin oo ay caawa isku hardiyeen Dugsiyada Sare ee Mutadda, Burtinle & Nawaawi, Boosaaso. – Radio Daljir
Buuhoodle, Aug 26 – Iyada oo uu caawa habeenkii 3-aad foodda la galay wareega 2-aad ee barnaamika Tartan Iyo Tacliin ee ay baahiso idaacada Daljir ayaa waxaa caawa isaga hor yimid dugsiyada sare ee Mutadda (Burtinle) & Nawaawi (Boosaaso).
Barnaamijka ayaa sidii looga bartay ku bilowday dardar iyo Xiiso dheeri ah, barnaamijka ayaa caawa waxaa goobjoog ka ahaa xarunta Daljir Bossaaso ee laga tebinayey mas’uuliyiin kala duwan oo ka kala socda 3-da hay?adood ee barnaamijka iska kaashaday ee shirkadda Golis, idaacadda Daljir, iyo Dalladda Waxbrashadda Puntland.
Intaas kadib waxaa si toos ah loo gudda galay Su?aalaha Barnaamijka waxaana Iskuul kasta la weydiiyey 8 su?aalood, Iskuulka Mutadda Burtinle ayaa la weydiiyey 8 su?aalood wuxuuna ka jawaabey 4 kamid ah halka su?aal ka faa?iidaysi ahna ay heleen, guud ahaan dhibcaha Mutadda Burtinle aruursadday ayaa noqday 9 dhibcood.
Iskuulka Nawaawi, Boosaaso ayaa Isaga la weydiiyey 8 su?aalood wuxuuna ka jawaabey 6 ka mid ah iyo 3 ka faa?iidaysi ah; waxaana Wadarta Dhibcihiisu noqdeen 15 dhibcood, taasoo sababatay in Guushu Caawa Raacdo Dugsigga Sare ee Nawaawi, Boosaaso.
Wareegan oo ah wareeg aad loo xiisaynayo ayaa habeen danbe waxaa isku haleeli doona Alwaaxa, Garoowe, iyo As-har, Qardho; la arki dooonee midka la reebo. Habeenka xiga ayaa waxaa masraxa wada imaan doona Dugsiyada Sare ee Hawd, Buuhoodle & Al-nuur, Badhan; loo fadhiyee kuwaasna.
*** Waxaana Xusid Mudan in Caawa uu markii u horaysey intii Barnaamijku socdey uu Studiyaha Daljir yimaaddo Maareeyaha Guud ee Shirkadda Isgaadhsiinta Golis Telecom Somaliya Md. Aadan Sheekh-Doon, Isagoo xiligii soo galay lagu soo dhoweeyey Maykrafoonka, Islamar ahaantaanna balan qaad u sameeyey labadda Dugsi ee tartanku caawa ka dhexeeyey, kuwaasoo uu ugu balan qaaday lacago uu u marinayo adeega Sahal Service.